Itti Gaafatamummaa Hawwaasa - Sheer Itiyoophiyaa Ethiopia
Sheer hojjettoota isaa baay’ee dinqisiifata. Nuti seera bu’ura kaka’uumsa daldalaa sadarkaa qulqullinaa Dhaabbata Hojii Adunyaalessaa (ILO) tin hojiirra oolchinee jirra. HojjettoonniSheer hundinuu bu’aalee kallattii fi kallattiidhan alaa ni qabu:
Hojjettoota hundaaf kontiraata dhaabbataatu kennamaaf, kanaafuu nuti hojjettoota guyyaa fi yeroodhaaf hin qacarru. Sheeriif hojjechuu jechuunmindaa sirrii, durgoowwan qajeelaa, mana jireenyaa, fi kunuunsa fayyaa bilisaan argachuu jechuu dha. Hojjettoonnikeenya waldaa daldalaa galuuf mirga qabu. Nuti dabalataanis gatii irratti wal falmuuf waliigaltee (CBA) qabna. Ijoolleen hojjettootaa irratti argamuu danda’u Mana barnootaa Sheer kaffaltii malee (umuriin itti jalqaban 4) Hojjettoonnihaaraa qacaraman hundinuu leenjii fayyaa fi eeggannoo guyyaa jalqabaa irratti argatu. Nuti meeshaalee barbaachisoo ittisoo dhuunfaa (PPE) ni kennina, kanaafuu gochaalee hojii waliin wal qabatani irratti balaadhaaf saaxilamuun ni xiqqaata.
Kibabii keenya maasii Zuwaay/Baatuutti argamu keessatti Hojjettoonni laaqanaa fi irbaata isaanii nyaachuu akkasumas ta’ii adda addaatif itti itti fayyadamuu danda’u.
Hojjettoonni keenya koreewwan baay’ee keessa galuu ni danda’u:
Waldaa hojjettootaa (Waldaa bu’uraa Sheer Itiyoophiyaa Dhaabbata dhuunfaa itti gaafatamummaan isaa murtaa’ee )
koree eeggannoo Ogummaa fi Fayyaa
Koree Ispoortii fi iddoo bashannanaa
Dhiyeessa bishaan dhugaatii naannoolee baadiyyaatif
Itiyoophiyaa keessatti keessumattuu naannolee baadiyyaa muraasa keessatti hanqinni bishaan dhugaatii ni jira. Akka carraa ta’ee bishaan bool’awwan baay’ee keessaa filooriinii baay’ee qaba. kanumaafi kan nuti gandoota naannoo ollaa keenya jiraniif sarara bishaanii kan ijaaruun isaan gargaarru bantuu bishaanii, kan akka Bochessa fi Worja Washgula. Aluto Gulbaan piroojectii haarawaa dha.
Sheer Itiyoophiyaan kan ofii isaa ni qaba Istaadiyomii kubbaa miillaa. Istaadiyomiin taphoota hojjettoota keenya gidduutti taasifamu, akkasumas garee Bunaa, garee biyyoolessaa Itiyoophiyaa ni keessummeessu.
Kanaan dura, ijaarsa bataskaana Ortodoksii miidhagduutiif Sheeriin arjoomee jira
Nuti IDH waliin ta’uun piroojektoota adda addaa kanneen akka taliigaa kosii bu’aa qabeessa, bosona deebisanii dhaabuu, lafa barbadaaye deebisanii ijaaruu, leenjii gochaalee qonnaa gaarii fi hayaasintii (hyacinth) bishaanii adeemsisuu qonnaan bultoota lafa xixiqqoo qabaniif kennuu irratti hojjechaa jirra.
IDH, inni kaka’umsa daldalaa walirraa hin citnee kan ta’e, Intarpiraayzii hawaasummaa kanneen akka daldalawwan, Ispoonsaroota, mootummaalee fi hawaasa siiviilii waliin hojjechaa sona cancala addunyaalessaa keessatti waljijjiirraan daldalaa walitti fufiinsa qabu akka jiraatu kan godhuu dha. Isaan kaampaaniiwwan, CSOs, jaarmiyaalee faayinaansii, dhaabbilee omishtootaa, mootummaalee seektaroota baay’ee fi haalotii lafaa Afriikaa, Eeshiyaa fi Ameerikaa kibbaa keessatti omisha walitti fufiinsa qabuu fi daldala mirkaneessuuf kan hojjetuu dha. Tooftaalee hojii haarawaa uumuu, induustirii walitti fufiinsa qabuu fi gabaa haarawaa walitti fufiinsa qabu daldala irratti xiyyeeffatanii argannoowwan ni guddisuu hojiirra oolchuu. Kaayyoon isaan kanneen hundaa jijjiirrama qilleensaa, badiinsa bosonaa, walqixxummaa saalaa, mindaawwan jireenyaa fi galiiwwan jireenyaa irratti dhiibbaa guddaa uumuun galmawwan guddina walitti fufiinsa qabaatu bara 2030 irratti mirkaneessu dha.
FSI (Floriculture Sustainable Initiative) Kaka’umsi misooma abaaboo walitti fufiinsa qabuu adda dureewwan seektara misooma abaaboo walitti fiduun /cancala uumuun, gochaalee isaanii abaaboo biqilchuu – guddisuu isaanii yoo xinnaate 90% irraan ga’uun walitti fufiinsa akka qabaatu godha. Gareen biqilchitootaa kaampaaniiwwanii fi qooda qabaattootni beekumsa walirraa fudhachuu fi omisha walitti fufiinsa qabuu fi daldala kakaasuuf waliin hojjetu. Miseensotni galma haarawaa bara 2025 kaa’anii jiru:
Read all about Itti fufiinsa
Read all about Oduuwwan